Enwereọnọdụmgbeịna-enweghịike imepe CMS maọbụnrụnyenzukọgịma jikwaandịọrụsite na ikpo okwu。 Ka e are yana-achọrọgịma gharaịnwetaakaụntụnchịkwagị-kedu iheịga-eme?
Comingbịpụtanamgbapụtagịbụihentanetịn’ihu-MySQL n’ihu-phpMyAdmin-nke ga-enyeregịaka ijikwaakaụntụonyeọrụsaịtịgịsite naịmeihe ozugbo na nchekwa data。 Ngwáọrụahụjikọtaraya na nnukwu ogwe njikwa ngalaba（cPanel、Plesk、VistaPanel、wdg）na、mgbeọna-anọghị、enwere ike itinye ya na savagịsite nandịnrụnyeakpaaba nakkaabanakụaabanakụ 。Softaculous）。 Agaghịatụlentinyeakwụkwọntuziaka maka obere ntuziaka a.
3 phpMyAdmin njikwa njikwa maka XMBフォーラム
3.4 Tzọ ‘レイジー’!
4 Bonus SQL Usoro：MepụtaAkaụntụOnyeỌrụ
phpmyadmin bu ihentanetị、nke mepere emepe nke PHP maka njikwa nchekwa data MySQL.
Tobias Ratschiller、onyemepụtaraya、malitereịrụọrụna phpMyAdmin na 1998dịka iheọzọna MySQL-Webadmin、manaọtụfuruọrụahụna 2000 n’ihi naọnweghịoge ijilekọtaya。 Mmemmeatọahụweghaara mmepeahụna 2001、onye hiwere ulo oru phpMyAdmin。 Ọganiihuya n’etitindịwebmasterbụn’ihi njiri mara webusaiti、madịkwamfe iji nweta ngwaahụsite na ngalaba njikwa ngalaba（cPanel、Plesk、VistaPanel）.
Ịnwere ike ijiụzọabụọabata na nchekwa data n’ime phpMyAdmin：
njikwa site na nyochaajụjụSQL
N’etiti usoro CMS kacha ewu ewu nandịodeakwụkwọ、nhọrọmaka ntuziaka a dara WordPress na Nzuko XMB、agbanyeghịna enwere ike itinye usoro nkuziahụnangwanrọsaịtịọbụladabere na ngwan.
Banye naakaụntụcPanelgị（maọbụngalabanlekọtaBochumweebụọbụlaọzọna ngalabagị）。 phpMyAdmin n’okpuru otu ‘Enweta data’ weepịaakara phpMyAdmin：
NchọgharịweebụphpMyAdmin ga-emeghe na windoọhụrụ。 Ozugboịbanyere、họrọnchekwa dataịchọrọịrụọrụsite na akuku aka ekpe。 Naatụanyị、nchekwa databụwptest_wp234。 Pịaya.
あなたmepee ebe nchekwa datagị、ịga-ahụndepụtanketebụlya niilen’akụkụaka ekpe ya、ebe isi peeji na-egosigịndepụtanke otutebụlndịahụnwerengwaọr ‘nọredetuhịr’nọddehtr ‘nch Iji banye nandepụtandịọrụgị、pịanatebụl ‘wp_users’ ma leleendepụtankendịọrụ.
Nwere ikeịgbanwenzeregị、email、URL URL、wdg Mepeeahịrịjikọtaranaakaụntụnjirimaragịsite naịpị（enwere akara ngosipensụlna-esotenjikọ）iji bido imezi ozigị。 Ihe onyonyo a n’okpuru na – egosiputa uzo ihe omuma nke onye can ghaziri dezie
Iji gbanweepaswọọdụgị、ịkwesịrịịhọrọMD5サイトna menundọpụta。 Deepaswọọdụsiri ike（ịnwereike iji ya random pasene generator makansonaazụka mma）。 Ozugboịmechara、chekwaa mgbanwegị.
MD5bụ頭字語maka Ozi-Digest（algorithm）v。5、ọrụakụnụbacrypto nke na-eweghachi uruọnụọgụ32. Ulo ‘user_pass’ ga-agbanwepaswọọdụọhụrụgịna eriri akpanọmbaMD5 32.
Ọbụrụnaịchọrọiwepụakaụntụspam niile、laghachiazụnatebụl ‘wp_users’、họrọahịrịndịọrụweepịabọtịnụ ‘Hichapụ’ na ala nke ibeahụ。 Ọbụrụn ’ịchọrọiwepụotu onyeọrụ、intad、naanịpịanjikọ“Hichapụ” n’ahịrị onyeọrụ（lee ihe onyonyo ebe a n’aka nri）.
phpMyAdmin na-enye ohere kandịnjikwa datarụọọrụnkwupụtaSQL ozugbo na nyochaweebụ。 mgbe imepere nchekwa datagịna phpMyAdmin、ịga-ahụusoro nketaabụna isi peeji-Chọgharịa、Structure、SQL、Chọọ、Tinye、Mbubata、Mbubata、Nrụọrụ：pịataabụSQL iji nweta sheiweebụSQL nkeị na-agbankwupụtagị。 Rịbaaka na nseta ihuenyo 4 na ntuziaka a makaọnọdụtabahụ.
Ihena-esonụbụ3コードスニペットịnwere ike iji iji dezieakụkọnjirimara site naarụmọrụSQL.
MARA：サイトna ‘youraccountname’ mpụtaraaha njirimara mba nnabatagị。 Nke abụịdịnjirimara nchekwa datakachasịna gburugburu Bochumòkè、ebe a na-ekenye nchekwa dataọbụlana onyeọrụya。 N’ihi ya a mata（“ _”）n’etitigịBochum aha njirimaraakaụntụna aha nchekwa datagị。 Endrewedịndịọzọnke njirimara nchekwa data nke na-ejinaanịaha nchekwa data。 Mgbakọnkeịga-ejibụnke egosiri nanrụnyephpMyAdmingị.
UPDATE `youraccountname_databasename`.`wp_users` SET` user_pass` = MD5（ ‘testuserpasswhere’）WHERE` ID` = 2;
Mmelite ‘youraccountname_databasename`.`wp_users`edits ma melitetebụl’ wp_users ‘n’ime nchekwa data’ youraccountname_databasename ‘.
SET `user_pass` = MD5（ ‘testuserpasshere’）na-edobe uru nke njirimara ‘user_pass’ na MD5 hash string nke ‘testuserpasswhere’.
イーブ ‘ID` = 2; na-agwagịna NJ ojii onyeịna-etinye mgbanwe maka yabụ＃2。 O doro anya na nke abụNJ iheatụdịebe a; ọnwere ikeịbụNJọrụọbụla.
UPDATE `youraccountname_databasename`.`wp_users` SET` user_login` = ‘aha njirimara ohuru’、 ‘user_nicename` =’ aha njirimara ohuru ‘、’ user_email` = ‘[Eメールna-echebe]’ EGO ‘ID` = 1;
Banyereスニペットmbụ、UPDATElinena-akọwapụtaokpokoro a ga-agbanwe、na ebe nchekwa datadị.
SETfunction a na-arụụrụna 3dịiche iche：ọna-edobe ‘user_login’ na ‘user_nicename’ na uruọhụrụ ‘aha njirimaraọhụrụ’、yana ‘user_email’ na ‘[Email na-echebe]’。 Chee na ‘user_login’ na ‘user_nicename’bụnjirimaraabụọdịiche iche nwere otu uru：nkembụbụaha njirimara ejiri abanye、nkeikpeazụbụaha ga-egosi na ibeweebụgị。 Iheatụ： ‘greatboy84’bụaha nbanye、 ‘Frank Span’bụahaegosipụtarana ibe.
WHERE ‘ID` = 1; agwagịna ID onyeọrụịgbanyerebụnọmba＃1.
Hichapụsi ‘youraccountname_databasename`.`wp_users` WHERE `ID` = 2
Ahịrịnkembụna-agwagịna gaga-ewepụihe natebụl ‘wp_users’ na nchekwa data ‘youraccountname_databasename’.
Ebe ‘ID` = 2 na-egosi Njirimara onyeọrụịna-ehichapụbụ＃2.
phpMyAdmin njikwa njikwa maka XMBフォーラム
Nbanyegịna ngalaba akara panel na-emeghe phpMyAdmin。 Họrọnchekwa datagịmachọọmakatebụl ‘xmb_members‘：o nwere ihe otu ndi otu gi di.
Pịa ‘Dezie’ naahịrịjikọtaranaakaụntụọrụgịma dezie ozi njirimaragị（lee fotodịn’okpuru）。 bọtịnụ ‘Gaa’を参照してください。ijichekwaa mgbanwegị.
Ihena-esonụ2 koodu snippets na-egosigịotu esi dezie maọbụhichapụotu XMBọrụakaụntụsite na MySQL.
UPDATE `youraccountname_xmbdatabase`.`xmb_members` SET` aha njirimara` = ‘bigsmurf85’、`paswọọdụ`= MD5（ ‘xmbuser178pass’）、 ’email` =’ [Email na-echebe] ‘、 `saịtị`=’ http：/ /domain.com ‘、 `ọnọdụ`=’ US ‘WHERE` uid` = 139;
DịkaọmụmaatụWordPressdịn’elu、koodu SQL a na-eme ka ozi onyeọrụnweta ugbu a naụkpụrụọhụrụakọwapụtara.
2.HichapụakaụntụXMB so naakaụntụ：
Hichapụsi ‘youraccountname_xmbdatabase`.`xmb_members` WHERE `uid` = 178
Ahịrịnkembụna-ekwu naịga-ewepụdata NJ maọbụkarịa（ ‘uid’ ebe a）na nchekwa data ‘xmb_members’。 NkeabụọakọwapụtaranọmbaNJ onyeọrụ、178 na nke a.
Usoro MD5 egosiputala nambụadịghịmfe na 1996、mgbe Hans DobbertinchọpụtaramkparịtaụkanaọrụMD5 hash、na-ekerịtaakụkọbanyerendịọzọọtụtụafọ。 Mgbeanyịkwuru ‘ịkparịtaụka’anyịna-ezubeọnọdụnkeụdịodidedịiche iche（yabụokwuntughe）nwere otu uru hah。 Akwukwo a zuru oke ma enweghi ike kpuchie ya na otu paragraf na ntuziakadịnkenke、manaatụlaegwu-MD5 ka nwere ikeịchekwagịn’ọtụtụisiọwụwadịkaesikọwaaya naakwụkọwọ.
Agbanyeghị、usoro nchekwaọzọga-eme mgbeịgbanwecharapaswọọdụgịna phpMyAdmin（iji MD5 izo ya ezo）bụbangbanwe yaọzọnaprofaịlụnjirimara WordPressgị。 N’ezie、WordPress ga-ezochipaswọọdụgịsite na ijiọbaakwụkwọakpọrọphpass、nkena-agụnyenchebe ma ya mereọbụghịngọngọアルゴリズムngwa ngwa.
Zybụonyeumengwụapụtaghịnanhọrọna-ezighi ezi。 Karịamgbeọbụla、usoroaghụghọanyịzụpụtaraiji chekwaa ogetọghataranaarụmọrụweebụsaịtịna okporoụzọdlu elu、yabụkaanyịghara ileghara paragraf a.
‘Ireumengwụ’bụiji ebeakaụntụonyeọrụスパマーmepụtaakaụntụonye maọbụenyi nkeakụkọifo。ケドゥ?
Usoroahụdịmfe-ihe niile ga ga-emebụimeghendepụtandịọrụgịn’ime nchekwa datagị（ịnwere ike ijiụzọnyochaa makaụdịọrụadịmfe）、pịabọtịnụ "デジー" maka eriri onyeọrụahọrọma dezie mpagharandịa（hapụIDdịkaọbụ）：
Na mgbakwunye、ịnwere ike iji nzaajụjụSQL maka nhazi ederede onyeyerụm gosirigịnambụna ndu a.
ああ、kaanyịdepụtaatụole na oledịmkpa：ịnwere ikeịchọakaụntụadịgborojanasaịtịgịmaọbụblog iji nwalee pluginsọhụrụ、hacks na mods、maọbụikekweịchọndụọye ye ye ye ye ye ye ye yeọọọọọ別名iji nwee ha iji。 Ọzọkwa、enwere ike iji ‘forum bot’na-ebipụtaiwubọọdụ、iwu ngalaba yana ihendịọzọ。 N’ezie、echichegịbụnjedebe。
Bonus SQL Usoro：MepụtaAkaụntụOnyeỌrụ
Obere mgbakwunyega-afụụfụ、ịga-enwe？ IhendịabụihendekọSQLabụọ：nkembụna-emepụtaakaụntụọhụrụmakagịSaPresstịWordPress、nkeabụọbụonyeọrụXMBフォーラムọhụụ.
INSERT banye ‘youraccountname_databasename`.`wp_users`（ `user_login`、` user_pass`、 `user_nicename`、` user_email`、 `user_registered’、` user_status`）VALUES（ ‘newusname3’、MD5（ ‘newodeword3）’ ‘、’ [メールna-echebe] ‘,
Koodu onodu aputa ga emeputa onye oru ohuru ma gha enye ihe ngbama（ihe omuma ya）na njiri mara ‘user_login’、 ‘user_pass’、 ‘user_nicename’、 ‘user_email’、 ‘user_regised’ and ‘user_status’.
INSERT banye ‘youraccountname_databasename`.`xmb_members`（’ aha njirimara ‘、’paswọọdụ`、 ’email`、’ọnọdụ ‘、’ọnọdụ`）VALUES（ ‘fairyland’、MD5（ ‘fairypass123’）、 ‘[Email na-echebe ] ‘、’メンバー ‘、’ US ‘）